करोड पति नै हुन्छ भने Tiktok लाइभ नै बसौ त ? किन रातदिन काम, पेशा अनि जागीरतिर धाइराख्नु !
सत्य के छ भने Tiktok अहिले धेरैले मनोरञ्जन को लागि रुचाएको सामाजिक सन्जाल हो।आजकल त कलाकार या नव कलाकार अथवा प्रतिभाशाली ब्यक्तिलाई स्थापित गर्न यसले धेरै सहयोग गरेको छ। यति मात्र नभइ गीत सङ्गित, म्युजिक भिडियो, चलचित्र आदिको बिज्ञापनका लागि राम्रो भुमिका खेलेको छ।अनेक भुगोलका मानिसलाई एकै ठाउँ जोडेको छ। यसर्थ यो एक रमाइलो मञ्च बनेको छ।
यति मात्रै नभएर केहि समग्र देश या बिषयलाई हेर्दा यो त्यति उचित भने लाग्दैन । जो करोडपति बने पनि करोड बिदेशबाट या नयाँ पैसा बनेर भने आउने हैन । देश भित्रैको एक युजरको पैसा अर्को युजरको अकाउन्टमा जम्मा हुने हो, कि त्यहा एक प्रोसेस हुन्छ एक अलि चलेको युजर अर्कोलाई फलोअर बढाइदिन्छु भनि गिफ्ट संकलन गर्न लाइभ जान्छ र अरु युजरले गिफ्ट पठाउन रिचार्ज गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरि धेरै युजरहरुको रिचार्ज गिफ्ट मार्फत लाइभ बस्नेले लिने हुदा यो देश भित्रै पैसा घुमिरहने कुरा हो भयो। गिफ्ट संकनल गर्न लाइभ कर्ता दिन भर बन्द कोठा भित्र घाटि सुक्ने गरि कराइरहेको हुन्छ।नकि यो उत्पादनशिल छ न त सिर्जनात्मक । आजकल Tiktok नचलाउने मानिस कम नै हुन्छ अझ युवा पुस्ता त सबै भन्दा फरक पर्दैन्।
अब यसरि करोड या लाख को होडमा सवै लाइभ जान थाल्ने हो भने त अव देश Tiktok मय हुने भयो , लाइभ मय हुने भयो। अव एउटा शिक्षकले पढाउन छोडेर लाइभ बस्ने भयो , पत्रकार ले पेशा छोड्ने भयो, वकिल ले कानुन बिर्सने भयो, समाजसेवि लाइभ मै ब्यस्त हुने भयो, सरकारी जागिरेलाई आफ्नो पेसा र आम्दानी फिक्का लाग्ने भयो, बिद्यार्थीले स्कुल कलेज जान या अनलाइन कक्षा लिन छोड्ने भयो, कृषक ले उत्पादन रोक्ने भयो , भोलि म आफै काम छोडेर लाइभ रोज्न सक्छु । काम गर्न सवैले छोड्ने भयो, ड्राइभर ले गाडि बाटै लाइभ दिदा दुर्घटना होला भन्ने डर अव यो सवै अत्ति भयो।
अव सरकार ले सोच्नु पर्यो, कि Tiktok बन्द गरेर सवैलाइ रोजगारी दिनु पर्यो हैन भने Tiktok मन्त्रालय नै खोलेर सवैलाई Tiktok चलाउन मदत गर्नु पर्यो।
हाल जापान ।